“Dawladda Ereteriya waxaanu leenahay dalkayaga nooga daaya farogelinta” Madaxweyne Siilaanyo | Somaliland.Org
September 28, 2010	Hargeysa (Somaliland.Org)- Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa cambaareeyay dawladda Ereteriya, isla markaana ugu baaqay inay ka waantowdo wax uu ku sheegay farogelin ay ku hayso arrimaha Somaliland.
Madaxweyne Siilaanyo waxa uu sheegay in ay Somaliland ku gedaaman yihiin marxalado kala duwan oo saamayn ku yeelan kara arrimaha nabadgelyada iyo degannaanshaha, waxaanu sheegay in lagaga gudbi karo wada-jir iyo iskaashi. “Walaalayaal, haddii aynu umadda reer Somaliland nahay, maanta waynu ognahay marxaladda aynu ku suganahay, maamulku wuxuu jiray muddo kooban. Muddadaa kooban ee uu jiray iyo wixii uu qabtay aad bay u kala fog yihiin, waxaanu ballan-qaadnay waanu amba-qaadnay. Waxaynu ku nool nahay mandaqad ay dhibaatooyin farobadani ka taagan yihiiin, layskuna dilay, laguna dhaawaco nabadgelyada iyo xasilloonida. Waxaynu ognahay in laynagu soo duulay, colal badanina inagu xeeran yahay,” ayuu yidhi Madaxweynaha oo shalay ka hadlayay munaasibadda qalin-jebinta dufcaddii 7aad ee ardayda Jaamacadda Hargeysa, waxaanu intaa raaciyay oo uu yidhi, “Waxaynu halkaa ku soo gaadhnay ee aynu Doorasho nabadgelyo ah ku qabsanay, duniduna inagu bogaadisay waa wada-jir aynu wada jirno oo aynu meel ka wada taagannahay horumarinta dalkeena iyo ilaalinta nabadgelyada. Maantana, waxaan leeyahay, waynu ognahay oo dadkii colaadda inoo hayay may madhan, ta mandaqadda taala waynu ognahay.”
Madaxweyne Siilaanyo wuxuu sheegay in Ciidamo dhawaan ka soo degay Xeebaha galbeed ee dalka ay ka dambaysay dawladda Ereteriya, isla markaana ay farogelin ku hayso Somaliland. Waxaanu ugu baaqay inay farogelinta ka dayso. “Dhawaan dalkeena cadow baa soo galay, ku duulaya waddamada aynu jaarka nahay, iyagoo nabadgelyada mandaqaddeena, dalkeena iyo kuwa aynu jaarka nahay damcay inay waxyeelleeyaan. Dadkaasi waxay ahaayeen dad lagu soo tababaray ama ka soo tallaabay dalka Ereteriya, sidaa darteed, waxaanu halkan ka caddaynaynaa in aanu aad iyo aad ugu dhaleecaynayno falalka noocaas ah ee argagixisada ah ee dhibaatada iyo xasillooni-darrada u keenaya mandaqadda aynu ku nool nahay, kuna dhaleecaynaynaa dawladda Ereteriya oo aanu leenahay; farogelinta ha laga daayo dalkayaga, dadkayaga iyo xasilloonida gobolka,” ayuu yidhi Madaxweynuhu, waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Waxaanu idiin sheegaynaa in aanu arrintaa tallaabooyinkii nagala gudboonaa ka qaadnay, tallaabooyin kale oo aanu gacanta ku haynaana way jiraan, dad la qabtay way jiraan, qalab la qabtay way jiraan, wixii isbedel u baahnaa iyo wixii guddiyada aanu u saarnay ee ay soo caddeeyeen, tallaabooyinkii loo baahnaa cidna uga gabban maynee, waanu qaadaynaa. Ma jirto cid aanu uga gabbanaynaa xasilloonida iyo degannaanshaha dalka. Markaa, dadweynaha reer Somaliland waxaanu u gudbinaynaa oo aanu leenahay hawlahaasi meelo kala duwan ayay inagaga furan yihiin ee waa inaynu gacan siinaa Ciidamadeena.
Previous PostHanti Dhawrka Guud Oo Ku Guda Jira Hawlgalo Ay Ku Baadhayaan Hanti Laga Lunsaday QarankaNext PostWarsaxaafaded: Madaxweynaha Somaliland Oo Kulan La Qaatay Madaxas Hayadaha Kala Duwan Ee Somaliland	Blog